I-Galaxy Qaphela i-9 ifumana uhlaziyo olutsha kunye nokuphuculwa kwekhamera | I-Androidsis
Kucacile ukuba i-Samsung ithambekele ekubekeni izixhobo kwindawo ebonakalayo, njengoko yayenzile nge Galaxy Note 9, i Uluhlu oluphezulu thaca ekuqaleni kuka-Agasti ophelileyo ngesimbo. Ngelixa inkqubo yokufota yale fowuni inomona, kubonakala ngathi inokuphucuka ngakumbi nangakumbi.
Enkosi kwi uhlaziyo lwamva njeSele iqalile ukufikelela kwiitheminali ezininzi zale modeli, iifoto ezikwiimeko eziphantsi zokukhanya ziphume ngcono, ke, ukuba ziphume kakuhle ngaphambili, ngoku uya kukuqonda ukubukhali okukhulu kuzo.
Uhlaziyo olutsha luqala ukuhanjiswa nge-OTA. Oku kuthetha ukuba kungekudala yonke i-Galaxy Note 9 iyakonwabela oku, nangona ezinye ziqala kunezinye, kuba ihlala ikhutshwa ngokuthe ngcembe, ukusuka kwilizwe ukuya kwilizwe, nakwingingqi ukuya kwingingqi. Sekunjalo, kuyacaca ukuba iza kuza.
Isebe lekhamera yale fowuni, eyenziwe nge-8MP ngaphambili shooter (f / 1.7) kunye ne-sensor yangemva kabini, apho eyona iphambili iyi-12MP enokuvula okungafaniyo f / 1.5 kunye f / 2.4, kwaye okwesibini I-12MP nayo, kodwa ngokuvula f / 2.4, iphuculwe. Ngokukodwa, iinkcukacha zohlaziyo zilandelayo:
Umgangatho womfanekiso wekhamera uphuculwe.
Ukuqaqamba kobuso kwiimeko ezibuyiselweyo kuphuculwe.
Iziphumo ze-HDR emini nasebusuku ziphuculwe.
Ukukhanya okuphantsi kunye ne-SNR (umqondiso kwingxolo yerediyo) iphuculwe).
Iphakheji yokufaka inobunzima nje be-302.03 MB kwaye ihambelana nesiqendu sokhuseleko salenyanga. Kuza nokulungiswa kwe-bug encinci kunye nokuphuculwa, kunye nokwenza ulungelelwaniso olwahlukileyo lokufumana ubushushu benkqubo.
Fumanisa: Ikhamera yeGlass Note 9 yeyona yesibini ibalaseleyo kwintengiso, ngokweDxOMark
Okokugqibela, kufanelekile ukuba uyichaze loo nto kuyacetyiswa ukuba unxibelelwano lweWi-Fi kunye nentlawulo elungileyo yebhetri Ngexesha lokukhuphela kunye nokufaka olu hlaziyo lutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy Note 9 ihlaziywa ngophuculo olukhulu lwekhamera
Eyona midlalo iphambili ye-Android